Iikholeji ze-Nevada: Qhathanisa noMthetho weNqaku lokuBala ukungena
Ukuqhathaniswa koLwesibini ngeCandelo leeKholeji zeeKholeji ze-Nevada
Bonke abafundi abasebenza nzima abaphumelele esikolweni esiphakamileyo baya kukwazi ukufumana ikholeji yaseNevada eya kubavuma. Akukho namakholeji karhulumente kunye neeyunivesithi ezikhethiweyo ezikhethiweyo, kwaye abaninzi banamkelwa ngokuvakalayo. Ukubona ukuba umThetho wakho weempawu zijoliswe kwiikholeji yakho yaseNevada oyikhethileyo, itekisi elingezantsi linokukunceda.
UMTHETHO I-Scores yeekholeji ze-Nevada (phakathi kwama-50%)
College of Southern Nevada kuvunywa
KwiKholeji ePhakamileyo kuvunywa
Nevada State College ukuvavanywa kwamathuba okuvota
I-Sierra Nevada College 18 22 19 20 16 23
IYunivesithi yaseNevada-Las Vegas 19 24 17 24 17 24
Yunivesithi yaseNevada-Reno 21 26 20 26 20 26
Ikholeji yeNtshona Nevada kuvunywa
Itheyibhile ibonisa amanqaku aphakathi kwama-50% abafundi abafundelayo. Ukuba umgangatho wakho we-ACT ungena ngaphakathi okanye ngaphaya kweli bakala, ulandele ukuba ungeniswe. Nangona izikolo zakho zingaphantsi kwezo zidweliswe, unethuba - ama-25% abafundi abaye bafumana amanqaku angaphantsi kweenombolo eziphantsi.
Abafundi abakwiikholeji eNevada akufanele baphelelwe ubuthongo ngenxa yamanqaku okuhlolwa amiselweyo. KwiYunivesithi yaseNevada-Reno, umzekelo, abafundi abane "B" okanye i-GPA ephezulu bangenayo nangona ukuba izikolo zabo zokuhlola ezilinganayo ziphantsi. Ikholeji yaseSierrav Nevada inenkqubo yokwamkelwa epheleleyo kwaye iqwalasela izinto ezininzi ezinokubaluleka ngokwongeziweyo kumabanga kunye nokuhlolwa kwamanani.
Qaphela ukuba zonke iikholeji ze-Nevada ziya kwamkela i-SAT okanye UMTHETHO.
I-Texas Tech GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Uludwe lweeMpawu ezinkulu ze-Snowboard
Indlela yokusebenzisa i-Japanese Word Shitsumon
U-Edgar Allan Iphoso: Ifilosofi yokufa
Yintoni i-Identification kwi-Rhetoric?
Iminyaka eyi-5 000 yokwenza i-Linen: Imbali ye-Neolithic Flax Processing
Akukho Ukutya Ngaphandle Kwemali: Uvavanyo kunye Nenkcazo
Ukukhanya okanye ubunzima obunzima?
UQuintus Sertorius wayeyiNtloko yamaLusitania
Ukungafani nokukhubazeka kwiGalofu
IYunivesithi yeVermont GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukutyelela i-Observatory, Jonga iiNkanyezi kunye namaPlanethi